ICroatia iwine indondo yethusi kwiWorld Handball Championship | 1xbet
Yize ecele amathikithi angu-400, uFerencvaros uzofika nabalandeli ababalelwa ku-200, ngeSonto, eRâmnicu Vâlcea.Bazophelezelwa ngabaqaphi, njengoba abalandeli be-FTC babhekwa njengabanye ababuyayo kakhulu eYurophu. U-Oltchim ufuna ukuwina umdlalo wokuqala emaqenjini amakhulu eChampions League kaCristina Neagu, olimale kabi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule!Abadlali abaqeqeshwa nguJakob Vestergaard banethemba lokufeza iphupho likaCristina nokunqoba indebe yeChampions League.
Ukulimala kukaCristina Neagu, ezinsukwini nje eziyisithupha ngaphambi kokudlala kwakhe emaqenjini eChampions League, kwaba yinto ebucayi ku-Oltchim.Umdlali ohamba phambili ngebhola lesandla emhlabeni ngo-2010, uNeagu wathumela umyalezo kozakwabo.
Ukunqoba emdlalweni noFerencvaros kuzonikezelwa kuCristina Neagu, kanti ozakwabo bazovala isikhala sokungabikho kwakhe.
“Bekuyihlazo okwenzeka kuCristina, kodwa ngicabanga ukuthi manje kufanele sicabange ngomdlalo futhi uma siwina lo mdlalo, kuzoba ngowakhe.”, wengeza u-Alexandrina Barbosa.
Tags: cristina neagu oltchim , ukulimala u-cristina neague, i-oltchim ferencvaros Champions League
Amaphuzu abe ngu-31-26 (14-13) evuna iCroatia, obehola isikhathi esiningi, ngaphandle kokuthi kube yi-12-11 kuphela eSlovenia.
Isenzo sokugcina somncintiswano uzoba ngeSonto, naseBarcelona, ​​lapho amaqembu esizwe eSpain naseDenmark ezohlangana khona.Ophethe indebe yamakhophi amabili adlule, iFrance, wenze into edumazayo, ekhishwa kuma-quarterfinal futhi ehlala endaweni yesi-6 kuphela.
Ngokuqondene nabase-Iberia, babuyela kowamanqamu CM ngemuva kweminyaka engu-8. Isicoco somhlaba kuphela seSpain saqala ngo-2005, ngemuva komdlalo wamanqamu neCroatia. Ngaleso sikhathi, u-Alexandru Buligan naye wayeseqenjini laseSpain, njengomqeqeshi wesibili. Kuma-World Championship ka-2011, abase-Iberia bathola indondo yethusi.
Ngokulandelayo, iDenmark ingompetha besicoco saseYurophu futhi yadlala owamanqamu eminyakeni emibili eyedlule, lapho yakhothamela iFrance. KumaNordics kungowamanqamu wesithathu, owokuqala owadlalwa ngo-1967, kodwa kuze kube manje abakaze basinqobe isicoco somhlaba.